Xa ndiphethe umntwana, ndifuna kakhulu ukuba ndingenayo ingxaki zempilo. Kodwa kuvela njalo. Ubunokwenzeka bokuthabatha amayeza ngexesha lokukhulelwa kuncinci. Kwaye siza kuncedwa ngokutya. Kwiimeko eziqhelekileyo zobomi beengcinezelo, intlungu yesisu, ukuphazamiseka kwesisu, sijwayele ukuqeda ngoncedo lwamachiza. Kodwa kuthekani ukuba umama ozayo akakwazi ukuthatha. Kudla ngokwaneleyo ukuba uthathe ukhangelelwano olukhethekileyo ekukhethweni kwemenyu kwaye uhlolisise ukutya kwakho, uqwalasele imeko ekhethekileyo esiyiyo. Indlela yokuchonga kunye nendlela yokuphatha ukuphazamiseka kwamathumbu ngexesha lokukhulelwa?
Iimbangela zesisu esisiswini sokukhulelwa.
Ehlobo, zenzeka rhoqo. Ukwenza oku, ukwanele, umzekelo, ukuba udle kunye nesaladi emile yonke imini, okanye nje udla i-peach overripe. Isisindo, isisu esicasulayo, ukuhlanza, igesi, ukwanda kweqondo lokushisa. Isantya sokuqala kweempawu kuxhomekeke kuhlobo kunye nobungakanani obusetyenziswe ekudleni kwemveliso emgangathweni. Ngokuqhelekileyo, iimpawu zivela kwiiyure ezingama-2-5 emva kokuxila.
Xa kukho ukuhlanza, ukutyhafiswa kwamanzi, iivithamini ezininzi kunye nezamaminerali ziyaqedwa, eziyimfuneko kakhulu kumzimba womfazi okhulelweyo, ngokunjalo ukugcina ibhalansi yamanzi ityuwa kubaluleke kakhulu. Ukongezelela, xa ukuphelelwa ngumdaka kutyalwa kwegazi, oko kungabangela ukubunjwa kwe-thrombi kwimilanjeni yeenyawo ezingezantsi, ngokukodwa phambi kweemvini ze-varicose. Iintsholongwane zamathumbu emathunjini, ngenhlanhla, ngokuqhelekileyo ayifinyelelanga kumntwana, kuba kuphantsi kokukhuselwa okuthembekileyo kwepentecenta.
Izifo zentlungu zingabikho nje ngenxa yetshefu, kodwa nazo zingabangela ezinye izizathu ezininzi: utshintsho lwe-hormones emzimbeni, uxinzelelo kunye nokungondleki. Xa kukho izibilini emathunjini, okungaze kwenzeke ngehudo, ithoni yesisu iyakhula. Ngendlela eqhelekileyo yokukhulelwa, oku akubangeli ukwesaba. Nangona kunjalo, ukuba isibeleko sele sisekhotheni, okanye xa usongela ukukhulelwa kwesisu, kufuneka ubize ugqirha.
Indlela yokunyanga ngexesha lokukhulelwa kwezifo zesisu.
Isisombululo esiphezulu sokurhudo, njengokuba usulele kwizifo zamathumbu, isiselo esininzi. Ukubuyisela ukulinganiswa kwetyuwa yamanzi, kubangelwa ukulahlekelwa kwamanzi, kufuneka uphuze isisombululo se- "Regidron", i-decoction ye-chamomile okanye itiye eqinile. Ufanele uphuze malunga neyesithathu yeglasi yamanzi ngeyure.
Ukuba ekupheleni kosuku urhudo luyancipha, ngoko unokuqala ukutya ukutya kweesinkile kwisonka sengqolowa. Ngomhla wesibini, uqaphele, ungangena ekudleni kwe-inkukhu encinci ye-inkukhu, i-milk-milk products, i-porridge. Iimveliso ezinzima zingabandakanyi, njengoko zifaka isandla kwisisu esicasulayo.
Kwiintsuku ezintathu ezalandelayo emva kwesifo sohudo, sishiya ngokupheleleyo isobho seenyama, inyama ebisiweyo, imifuno kunye neziqhamo eziqukethe iifiber, eziqinisa umsebenzi wamathumbu. Ukususela ekusebenziseni ubisi, kwakhona, kufanelekile.
Izindlela zokukhusela ngokwesondo
Ungakhetha njani ukukhusela i-hormonal? Imiyalelo yokusetyenziswa
Ukusetyenziswa kwe-homeopathy ekukhulelweni
Ukuqhawula ngexesha lokukhulelwa, i-gas, i-flatulence
Iimpawu zoMlingo ze-charoite
Strawberry smoothie kwi tsholetele
Ubisi lwe-salmon ebomvu kwi-omelette ngeeshizi
Isipinashi kunye nesobho se-pearl
I-Hairbranding: ezizodwa zobungcali bezobugcisa
UFedor noSvetlana Bondarchuk baxelelwe ngokusemthethweni ngokuqhawula umtshato
Ziziphi iimeko zokukhulelwa amazinyo aphathwayo?
Ukufundisa abafundela isikolo ukuzithemba nokuzithemba
Impembelelo yokuqhawula umtshato
Bytovuha - kungekhona isigwebo
Indlela yokudala indawo ye-SPA ekhaya? Amanzi amancinci i-BWT-izinga eliphezulu lokuthuthuzela